Czech Republic na Denmark Euro 2021 Amụma na Betkụ nzọ Atụmatụ - latabernasanlucar.com
By Sara GrayJuly 2, 2021No Comments
Czech Republic na Denmark ga-abụ egwuregwu nke atọ na ngwụcha ngwụcha nke Euro 2020. A ga-eme asọmpi Czech Republic na Denmark na July 3 na 1800 elekere Central Eastern European Summer Time na Stadium Olympic na Baku, Azerbaijan.
Republicdị Czech Republic, usoro nwere ike na Usoro
N’ịga na Euro, Czech abụghị n’ụzọ zuru oke. Ha na-egwu egwuregwu 5 tupu euro ma merie naanị 2 n’ime egwuregwu ndị ahụ, tụfuru 2 wee dọta otu egwuregwu. Ha abughi ezigbo ihe n’ihu ihe mgbaru ọsọ ahụ, na-atụle naanị 1 ihe mgbaru ọsọ kwa egwuregwu na egwuregwu 4 ikpeazụ ha ma nyefee ihe mgbaru ọsọ 7 na egwuregwu ndị a.
Czech na-eme ihe ngosi dị mma n’oge otu a. Ha ruru ntozu nke knockout site na imecha nke atọ na otu D. Ha nwere otu akara nke akara dị ka Croatia (4) wee mechaa agba otu ahụ site na mmeri 1, akara 1 na 1. Czech gbara naanị ihe mgbaru ọsọ 3 n’oge egwuregwu 3 a mana kwadoro naanị 2.
Aslo Czech wepụrụ otu n’ime nsogbu kachasị mma na asọmpi a mgbe ha meriri Netherlands iji ruo eruo na nkeji iri na ise.
Czech guzobere na usoro 4-2-3-1 na ndị mwakpo sara mbara na-egbutu n’ime ya na ndị na-agbachitere ya na-enye obosara na mwakpo.
Ndị na-eto eto na-achọ ịnọdụ ala miri emi ma nyere aka na ịgbachitere ma nye bọọlụ ndị na-awakpo bọọlụ ogologo bọọlụ mgbe ndị na-agba ọsọ na-ebuli elu elu ahụ n’oge ọgụ. Vladimír Coufal magburu onwe ya n’inye obe na gafere n’aka nri. O nyere obe dị ịtụnanya site n’aka nri nke onye ọkpụkpọ kpakpando ha na-ebute ihe mgbaru ọsọ mbụ ha na egwuregwu mbụ ha na Euro 2020 megide Scotland.
Onye midfielder ha na-ahọrọ nke mbụ bụ 26 dị afọ Tomáš Sou 26ek bụ onye na-egwu egwuregwu na-agba gburugburu na-eche nche, na-asọ mpi maka bọọlụ ikuku, na-eme ka ọ na-aga n’ihu na-aga n’ihu na-aga n’ihu na bọl na-aga n’ihu mgbe Alex Kral bụ onye na-agbachitere nchebe nke na-enwe mmasị ịnọ. ntakịrị azụ ma ọ nwekwara ike ịkwanye n’ime igbe mmegide ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Onyeisi ha bụ Vladimír Darida na-amalite n’ihu ndị a nke etiti abụọ a na ọ bụ onye na-egwu egwu nke na-ebuso ọgụ ọgụ ma bụrụkwa ihe ịtụnanya ịtụnanya na mbuso agha. Darida jikọtara ya na onye egwu kpakpando ha, 25 afọ Patrik Schick.
Schick nwere ike ịdaba miri emi ma soro ndị na-awakpo ndị ọzọ egwu ma nwee ịtụnanya na ikuku. Schick gbara goolu atọ niile a na-eche maka Czech Republic n’oge asọmpi otu ha.
Schub dị afọ 25 bụ Jakub Jankto n’aka ekpe na Lukáš Masopust n’aka nri.
Ndị Czech na-achọ ịpị ndị mmegide ahụ na ndị egwuregwu 4 a na-awakpo mgbe ha enweghị bọọlụ ebe ndị na-agbachitere obosara na-ada azụ iji mepụta azụ 4 ma nyekwa ha nchekwa ọzọ site n’aka ndị etiti ha bụ Souček na Kral.
Czech nwere adịghị ike ụfọdụ dị mkpa iji rịba ama. Ha na-adighi ngwa ngwa na-agba ọsọ n’azụ azụ ha site n’aka ndị na-awakpo ngwa ngwa karịsịa site na mbara ma ha enweghị kpọmkwem ụlọ ọrụ kachasị nwee ọgụgụ isi nke na-ahapụ ha dị mfe na azụ.
Czech Republic Pụrụ iche n’ahịrị
Ewezuga ntinyeghachi nke Kral, anyị na-atụ anya na akara Czech agaghị agbanwe agbanwe.
Formdị Denmark, Usoro amụma na usoro
Denmark bụ 10 nke kachasị mma n’ụwa na 7th kasị mma egwuregwu na Europe dị ka FIFA. Ha bụ ndị otu nke ise kachasị mara ọkwa nke otu 8 ndị tozuru etozu na nkeji asatọ na Euro 2020.
Tupu ịmalite mkpọsa Euro 2020 Denmark dị ezigbo mma. Ha enweghị mmeri na egwuregwu 5 ha na-egwu na 2021 tupu mmalite egwuregwu ha na Euro 2021 megide Finland wee gụchaa nke abụọ na otu ha na oge 2020-21 nke Nations League.
Denmarktù ndị Denmark nwere Belgium nke ọnụ ọgụgụ 1 FIFA na England nọ na ya dị ka nke atọ kachasị mma na Europe. Denmark gwụchara n’elu England bụ nke na-egosi etu Danes si dị mma.
Ọrụ Denmark na Euro 2020
Denmark tụfuru egwuregwu mmeghe ya na Finland, otu akụkụ nke anọ nke 54 wee bụrụ otu egwuregwu nwere ọkwa nke abụọ kachasị na Europe na Euro 2020.
Ma ọnwụ a bụ ihe na-adịghị mma maka Denmark na-atụle isi ihe mere n’oge egwuregwu a. N’oge egwuregwu ha megide Finland, otu n’ime ndị egwuregwu Denmark nwere ọgụgụ isi, Christian Eriksen dara n’ala ma ọ fọrọ nke nta ka ọ nwụọ n’ihi njide ejiri obi.
Onyeisi Denmark, Simon Kjaer mere ka ezigbo onye ndu mgbe Eriksen dara. Ọ kwụsịrị n’ọkwá ya ma wepụ ndị egwuregwu ndị ọzọ ka ha debe Eriksen ozugbo na ọnọdụ mgbake.
Kjaer ghọtara ihe na-eme ma rụọ ọrụ iji kwụsị afọ 29 ka ọ ghara ilo ire ya wee were mkpebi ịchekwa ndụ iji malite inye CPR na Eriksen. Ka EMT bịarutere na olulu ahụ, ọ chịkọtara ndị òtù ọlụlụ ya iji wuo mgbidi gburugburu Eriksen iji kpuchido nzuzo ya site na anya nke ndị mgbasa ozi.
Denmark kpebiri ịga n’ihu n’egwuregwu a n’agbanyeghị nhụjuanya nke uche ha diri dị ka otu ma debanye aha 22 na mgbaru ọsọ ma e jiri ya tụnyere nke naanị otu Finland.
Denmark ga-atụfu egwuregwu nke abụọ ha na Belgium 1-2 mana n’agbanyeghị na ha ga-ada megide ndị otu kachasị mma n’ụwa, ndị Denmark tinyere ezigbo ọgụ ịdebanye aha 21 iji jiri Belgium tụnyere 6.
Egwuregwu Denmark megide Russia bụ ebe Denmark malitere ịmịpụta ezie. Ha ji 4-1 mebie Russia iji ruo eru maka agba nke 16 dịka ndị ọgba ọsọ nke otu ha.
O doro anya na Denmark bụ ndị na-awakpo ndị kachasị ọgụ iji ruo eru maka ọkpụkpọ ebe ha nwere ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke mbọ.
Ndị Danes ga-emeghachi ụdị ha na egwuregwu mbụ ha na Wales, nke ha meriri 4-0 iji tinye ebe na nkeji iri na ise megide Czech Republic.
Denmark nwere ụfọdụ stats mara mma mara mma nke ga – eme ka ịchọrọ ile ha na egwu:
Ejikọtara Denmark na Italy na ndị otu kachasị agba bọọlụ mgbe ha gbasịrị goolu 9 na egwuregwu 4. Denmark nwere nke abụọ kachasị elu nke gbaa kwa egwuregwu.Denmark emeela nke abụọ kachasị elu nke dribble kwa egwuregwu n’etiti ndị otu niile nọ ugbu a. quarterfinals na nke atọ kachasị elu na otu niile na Euro 2020.
Denmark si eme
Denmark na-agbakọ na 3-4-3 maka egwuregwu 3 ikpeazụ ha. Ndị Dan jiri usoro a mee ihe n’ụzọ na-adọrọ mmasị. Ndị etiti etiti 2 na-anọkarị kọmpụta ma ghara ịda n’ihu ịbanye na ọgụ ahụ.
Ọ bụrụ na Denmark kpebie ikpokwasị na nrụgide ahụ na otu n’ime ndị etiti ahụ hụrụ ọdịiche dị na igbe mmegide nke enwere ike irigbu ọ ga-agbaba n’ime ya. Mana ozugbo onye midfielder a hapụrụ ohere ahụ Otu n’ime ụzọ abụọ gbara gburugburu ga-anọchi anya ya iji gbochie ọgụ ọgụ.
Na egwuregwu megide Wales Andreas Christensen nwere ike ịhụ na-eme kpọmkwem mgbe ọ ga-enwe ọganihu n’etiti midfield.
Denmark si azụ azụ dị mma na bọọlụ na n’adịghị ka ọtụtụ otu, enwere ike ịrụ ụka na etiti etiti bụ isi ihe na-eme ka bọọlụ gaa n’ihu kama etiti.
Ọ bụrụ na ndị mmegide na-aga n’ihu pịa etiti azụ, mgbe ahụ etiti etiti na-eweghara ọrụ a.
Nke a bụ uru magburu onwe ya maka Denmak n’ihi na ọ na-enye ha ohere ịga n’ihu bọọlụ ahụ site n’ọtụtụ ebe na-enweghị nsogbu ọ bụla.
Dị ka ị si hụ na foto dị n’okpuru ebe a, Denmark nwere ike ịnwe ndị egwuregwu 5 na ọgụ na ndị egwuregwu 4 na etiti mgbe ha na-awakpo. Usoro aghụghọ a na-enye ha ohere ịnweta ọnụọgụ ọnụọgụ na midfield.
Czech Republic na Denmark Euro 2021 Nsogbu
Ndị na-ere akwụkwọ na-enye nsogbu ndị a maka Czech Republic na Denmark egwuregwu na nkeji iri na anọ nke Euro 2020:
Site na nsogbu ndị a, anyị nwere ike ịhụ nke ọma na Denmark bụ ọkacha mmasị iji merie egwuregwu a.
Bookmaker na-enye Czech Republic na Denmark na Euro 2020
N’echiche anyị, b-nzọ bụ otu n’ime ndị na – eme akwụkwọ egwuregwu kacha mma maka ịkụ nzọ na egwuregwu Euro 2020. Ha nwere onyinye cashback ugbu a nke na-enye gị € 1 azụ maka € 5 ọ bụla ị mere na nzọ na Euro 2020.
Nwere ike pịa onyonyo ndị a ka ị gaa na B-Bets ma kwuo onyinye a na ngalaba nkwalite ha.
Czech Republic na Denmark Euro 2021 Amụma
Czech Republic na Denmark nwere ike bụrụ otu n’ime egwuregwu kachasị amasị na Euro 2020 n’echiche anyị, anyị ga-enye gị ihe kpatara kpatara…
Ulo oru abuo tinyere usoro nke nwere ike inye ndi otu uzo uru. Dịka ọmụmaatụ ma ọ bụrụ na ị cheta n’ụzọ ziri ezi, Czech hụrụ n’anya ịpịsi ike na ndị na-awakpo ha 4 ebe ndị Danes na-achọ inwe ọganihu bọọlụ na ndị na-agbachitere ha.
Nke a ga-apụta na ndị Danmark ga-akpachara anya ka ha na-aga n’ihu bọọlụ ahụ site na bọl ahụ n’ihi na ha ga-enwe ọghọm ọnụọgụ na ọkara nke ha (Denmark ga-enwe 3 na azụ na ndị agha 4 Czech)
Ma ndị Danes ga-enwe uru na midfield ma ọ bụrụ na ijikwa iji nwee ọganihu bọọlụ karịrị ọkara nke ha ka ha otu ma ọ bụ abụọ n’etiti etiti ga-aga n’ihu ịbanye na midfield. Nke a ga – enyere ha aka ịnọgide na – achịkwa na midfield ma gbochie Czech ka ha si n’etiti na – ewu ụlọ mgbe Danes tufuru bọọlụ.
Mgbe ndị Denmark nwere ike ịkwanye Czech na ọkara nke ha Czech Republic ga-agbachitere kọmpat 4-5-1.
Nke a pụtara na ndị Denmark ga-enwe ọnụọgụ ọnụọgụ megide agbachitere Czech Republic agbanyeghị, nke a pụtakwara na ọ bụrụ na Czech ekpebie ịkata obi, ha ga-enwe ọnụọgụ ọnụọgụ na mbuso ọgụ n’ihi na ha ga-enwe ụmụ nwoke 5 ebe ahụ na Denmark ndị ga-enwe 3.
Stylesdị football ndị a yiri ka ọ na-emegiderịta onwe ha nwere ike ịpụta na anyị ga-ahụ egwuregwu dị egwu na otu abụọ na-egwu egwuregwu egwuregwu dị elu ebe ha ga-agbanwe ngwa ngwa site na ịgbachitere gaa ọgụ.
Ọ bụrụ na anyị eburu n’uche eziokwu ahụ bụ na ndị Denmark nwere ọnụọgụ nke abụọ kachasị nke mbọ anyị nwere ike ịtụ anya na egwuregwu a nwere ọtụtụ ihe mgbaru ọsọ.
Dabere na nsogbu nke onye na-ere akwụkwọ setịpụrụ, anyị nwekwara ike ịtụ anya na egwuregwu a ga-asọmpi.
Dabere na ihe ndị a, anyị na-ebu amụma na Denmark ga-emeri mana ọ bụghị site na oke oke na egwuregwu nke ga-enwe ọtụtụ ihe mgbaru ọsọ.
Anyị na-ebu amụma na Denmark ga-eti Czech Republic 3-2.
Ndụmọdụ ịkụ nzọ dị na Czech Republic na Denmark
Ọ bụrụ na ị gụọ akụkọ anyị gbasara usoro ịkụ nzọ bọl na egwuregwu ịkụ nzọ bọl, ị ga-achọpụta Czech Republic na Denmark bụ egwuregwu zuru oke iji tinye nzọ na Euro 2020.
Ihe kpatara nke a dị mfe, nsogbu ndị otu ahụ dị n’elu 2.0 na ọ ga-abụ egwuregwu asọmpi.
Nke a pụtara na ị nwere ike okpukpu abụọ ego gị site na ịkụ nzọ na Denmark na okpukpu atọ ego gị ma ọ bụrụ na ị banye na Czech Republic.
N’ikwu ya, anyị nwere ndụmọdụ ịkụ nzọ maka gị nke nwere ike inyere gị aka imeri ego n’agbanyeghị onye meriri…
Tinye otu nzọ na Denmark iji merie na otu nzọ (nke nha anya ya) na Czech Republic iji nweta mmeri. N’okwu a ị ga – efunahụ ego gị naanị ma ọ bụrụ na enwere eserese mana ọ ga – eme na egwuregwu dị oke egwu.
Yabụ na ihe ị na-eme bụ ị kewaa ego gị maka egwuregwu ahụ. Ka anyị kwuo na ị nwere mmefu ego nke € 200 maka egwuregwu a. Place na-etinye otu nzọ nke € 100 na Denmark na € 100 ọzọ na Czech Republic.
Ọ bụrụ na Czech Republic enweta mmeri pasent gị ga-abụ 92.5% n’ihi na uru gị ga-abụ 5 385- € 200 = € 185 na 185 bụ 92.5% nke itinye ego gị nke € 200.
Ọ bụrụ na Denmark merie, ị ga-ejikwa 6% nweta uru (€ 212- € 200 = € 12 bụ 6% nke 200).
O doro anya na sistemụ a na-egosi na uru ị bara uru ga-adị ala ma ọ bụrụ na ị na-azọ otu otu (uru 112% ma ọ bụrụ na ị na-abanye na Denmark na 285% ma ọ bụrụ na ị na-agbanye na Czech Republic) mana usoro a na-eme ka ị hụ na ị gaghị efu ego ọ bụla.
Buru n’uche na nke a abụghị usoro ihe nzuzu. Ọ bụrụ na egwuregwu ahụ agwụ na ị ga-efu gị mana dịka anyị kwuburu na mbụ, ọ ga-abụ na ị ga-ese ihe pere mpe.
TeamOddsBet ỌnụegoWinProfit% Denmark2.12 € 100 € 2126% Czech Republic3.85 € 100 € 38592.5%
Ọ bụrụ n ’ị masịrị amụma anyị maka egwuregwu Czech Republic na Denmark na Euro 2020, lelee nyocha ndị ọzọ anyị na-ekwu banyere nkeji iri na ise:
Ihe Only ị ga – eji kpọọ na saịtị ịkụ nzọ dịn’ịntanetị K9Win na Singapore – Blog Online
An Insight On Online Toto Betting To Get New Joiner Gambling Enthusiasts — Casino Online Blog